"21 Dia namaly ny taranak’i Robena sy Gada ary ny antsasaky ny firenen’i Manase ka nanao tamin’ny mpifehy arivo tamin’ny Isiraely hoe: 22 Andriamanitra Andriananahary, dia Jehovah eny Andriamanitra Andriananahary, dia Jehovah, Izy no mahalala, ary ny Isiraely hahalala koa; raha fiodinana na fahadisoana amin’i Jehovah (aza mba mamonjy anay akory Hianao anio), 23 raha izany no nanorenanay alitara, mba hiala amin’ny fanarahana an’i Jehovah, na hanatitra fanatitra odorana, na fanatitra hohanina, na fanati-pihavanana, eo amboniny dia aoka Jehovah no hanadina; 24 fa tahotra tokoa no anton’ny nanaovanay izao; fa hoy izahay: Rahatrizay dia hanontany ny taranakay ny taranakareo hoe: Moa mifaninona akory hianareo sy Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely? 25 fa Jordana no nataon’i Jehovah ho faritra eo anelanelantsika, ry taranak’i Robena sy Gada, ka tsy manana anjara amin’i Jehovah hianareo; ka dia hampitsaharan’ny taranakareo tsy hatahotra an’i Jehovah ny taranakay, 26 Dia hoy izahay: Aoka isika hanorina alitara ho antsika, tsy hanaterana fanatitra odorana anefa, na fanatitra hafa alatsa-drà, 27 fa mba ho vavolombelona ho amintsika sy ny taranatsika mandimby antsika, hanaovanay ny fanompoana an’i Jehovah eo anatrehany amin’ny hanaterana fanatitra odorana sy fanatitra hafa alatsa-drà ary fanati-pihavanana mba tsy holazain’ny taranakareo amin’ny taranakay rahatrizay hoe: Tsy manana anjara amin’i Jehovah hianareo. 28 Ary hoy izahay: Raha tàhiny lazainy aminay na ny taranakay izany rahatrizay, dia hataonay hoe: Jereo ny endriky ny alitaran’i Jehovah, izay nataon’ny razanay, tsy hanaterana fanatitra odorana anefa na fanatitra hafa alatsa-drà, fa mba ho vavolombelona ho amintsika roa tonta. 29 Sanatria aminay raha hiodina amin’i Jehovah ka hiala anio amin’ny fanarahana an’i Jehovah hanorina alitara hanaterana fanatitra odorana, na fanatitra hohanina, na fanatitra hafa alatsa-drà, afa-tsy ny alitaran’i Jehovah Andriamanitsika, izay eo anoloan’ny tabernakeliny. 30 Ary rehefa ren’ i Finehasa mpisorona sy ny lohan’ny fiangonana, dia ny mpifehy arivo tamin’ny Isiraely, izay niaraka taminy, ny teny izay nolazain’ny taranak’i Robena sy Gada ary ny taranak’i Manase, dia sitrany izany. 31 Ary hoy Finehasa, zanak’i Eleazara mpisorona, tamin’ny taranak’i Robena sy Gada ary ny taranak’i Manase: Fantatray anio fa eto amintsika Jehovah, satria tsy nanao izany fahadisoana izany tamin’i Jehovah hianareo; ary amin’ izany dia efa namonjy ny Zanak’Isiraely tamin’ny tànan’i Jehovah hianareo. 32 Ary Finehasa, zanak’i Eleazara mpisorona, sy ny loholona dia niverina nandao ny taranak’i Robena sy Gada tany amin’ny tany Gileada ka nankany amin’ny tany Kanana ho any amin’ny Zanak’Isiraely ary nitondra valin-teny ho any aminy. 33 Ary sitraky ny zanak’Isiraely izany, dia nisaotra an’Andriamanitra ny Zanak’Isiraely ka tsy nihevitra hiakatra hiady aminy intsony handrava ny tany izay nonenan’ny taranak’i Robena sy Gada. 34 Dia nasian’ny taranak’i Robena sy Gada anarana hoe Edy ilay alitara fa vavolombelona ho amintsika roa tonta io fa Jehovah no Andriamanitra." Josoa 22:21-34
Ahiahy ho an’ny ho avin’ireo taranaka. Rehefa tonga tany amin’ny taniny avy ny taranak’i Robena sy Gada ary ny antsasaky ny firenen’i Manase dia nanahy ny ho avin’ireo taranany (24). Ny ony Jordana no nanasaraka ireto vahoakan’Andriamanitra roa tonta. Natahotra izy ireo ndrao: a) ho lavina tsy ho isan’ny vahoakan’Andriamanitra intsony ireo taranaka manaraka noho izy ireo mitoetra tery an-dafin’ny ony; b) tsy havela hanao fanompoana ho an’i Jehovah intsony (25). Toa lasa ny elanelan-tany no namaritra ny maha-vahoakan’Andriamanitra na tsia! Izy anefa tsy fehezin’ny fotoana na ny toerana: «Fa izao no lazain’ny Iray avo sy manerinerina, izay monina mandrakizay, masina no anarany: Ao amin’ny fitoerana avo sy masina no onenako, ary ao amin’ny torotoro fo sy ny manetry tena, hamelombelona ny fanahin’ny manetry tena sy hamelombelona ny fon’ny torotoro fo» (Isaia 57:15).
Tsy tahaka ny Alitara tao Silo. Tsy Alitara natao ho an’ny sampy na hanoloana ka hanadinoana tanteraka ilay Alitara tany Silo akory ity najoro. Tsy nanehoana fihodinana tamin’Andriamanitra ihany koa (26). Nataony ho vavolombelona sy ho fahatsiarovana fa izy ireo dia isan’ny vahoakan’Andriamanitra ary matahotra Azy. Ho vavolombelona ho an’ny roa tonta ihany koa fa Jehovah irery ihany no Andriamanitra (28-29, 34).
Fampahatsiahivana. Ankehitriny, n’aiza n’aiza toerana hiantsoana an’i Jehovah dia eo izy no hamaly antsika satria olony isika, ondry fiandriny ary fananany: «Ary any amin’ny tany izay nilazana taminy hoe: Tsy oloko ianareo, dia any no hiantsoana azy hoe zanak’Andriamanitra velona” (Hosea 2:1; Rômanina 9:26).